शायद व्यक्तिगत कम्प्युटर हरेक मालिकले पानी सिस्टम को अस्तित्व बारेमा सुनेका प्रोसेसर लागि ठंडा को। कम से कम, मिडिया मा प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया अनुसार, यन्त्र झन् यो सुनेर छ। तथापि, रोचक सहायक, सबै एक हतारमा, उच्च लागत बाहेक (यो दस हजार छ) किनभने प्राप्त गर्न, धेरै प्रयोगकर्ताहरू यसको सञ्चालनको सिद्धान्त बुझ्न छैन।
यस लेखमा ध्यान - पानी ठंडा प्रणाली CORSAIR H110 भनिन्छ। पाठक एक रोचक कम्प्युटर घटक थाह प्राप्त गर्न यसको विनिर्देशों सिक्न, फोटो हेर्न निमन्त्रणा र मालिक र विशेषज्ञहरु तपाईंको आफ्नै निष्कर्ष आकर्षित गर्न देखि प्रतिक्रिया आधारित छ।
तपाईं उत्पादन थाह गर्न सुरु गर्नु अघि, हामी पहिलो सिस्टम को प्रकारको यो के बुझ्न, आवश्यक यसको उद्देश्य के हो। वास्तवमा, यो एक नियमित कूलर छ। यो एक सुधार गर्मी अपव्यय छ मात्र यो बीच मुख्य भिन्नता। एउटै सिस्टम CORSAIR H110 उपकरण सञ्चालन सिद्धान्त मा एकदम सरल छ:
एल्यूमीनियम 15 सेन्टिमिटर द्वारा 28 को आयाम एउटा तरल कन्टेनर छ;
ट्यांक को एक छेउमा एउटा गर्मी डुब्नु छ र शक्तिशाली प्रशंसक संग सुसज्जित;
विभिन्न कोण बाट जडान दुई ट्यूब गर्न कन्टेनर गर्न;
अर्कोतर्फ दुई ट्यूब - तामा प्याड, प्रोसेसर मा स्थापित छ जो;
प्रणाली भित्र लघु खुम्च्याउने तरल यसरी क्रिस्टल देखि गर्मी averting, वरिपरि निरन्तर चलिरहनु गराउनुहुन्छ।
राम्रो सरल प्रणाली प्रभावकारी मात्र क्रिस्टल को तापमान कम गर्न सक्दैन, तर पनि बाडे भित्र हल्ला देखि कम्प्युटर को मालिक छुटकारा। आखिर, एक विशाल कम गति प्रशंसक धेरै चुपचाप सञ्चालन कि पानी-ठंडा प्रणाली स्थापित छन्।
पहिले नै CORSAIR ब्रान्ड परिचित छन् ग्राहकहरु फेरि ग्राहकहरु गर्न व्यक्तिगत निर्माता दृष्टिकोण रेखांकित, र सबै newcomers आनंद से को उत्पादन को मात्र होइन उपस्थिति, तर पनि यसको उत्कृष्ट उपकरण गरेर हैरानी छन्। आउँछ CORSAIR H110i GT 280mm चरम सुरुचिपूर्ण गत्ता बक्स मा प्रदर्शन, रातो र कालो रंग मा गरे। उत्पादन फोटो, विनिर्देशों र उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स भित्र को सूची: प्याकेजिङ्ग मा उपस्थित सामग्रीहरू बारेमा सबै आवश्यक जानकारी।
त्यसैले, किनकी हामी एकीकरण बारे कुरा गर्दै छन्, भविष्यमा मालिक सजग निर्माता प्लेटफर्म (यो सकेट छ) संग पूर्ण उत्पादन अनुकूलता पाऱ्यो छ कि हुनुपर्छ। त्यसैले, बक्स मा, ठंडा प्रणाली र निर्देशनहरू बाहेक कम्प्युटर प्रणाली एकाइ मा सजिलो माउन्ट डिजाइन लागि संलग्नहरू र एडेप्टर को धेरै पाउन सकिन्छ।
गुणस्तर सबै छ
पानी यसलाई सञ्चालन मा विश्वसनीय छ कि पहिलो स्थानमा CORSAIR H110 चासो खरीदारों ठंडा। आखिर, निर्माता आफ्नो उत्पादन रिसाव सुरक्षा को एक उच्च डिग्री छ भन्ने सुनिश्चित, र उमेर पाँच वर्ष को लागि मर्मतका बिना प्रयोगकर्ता कष्ट-मुक्त सञ्चालन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यो यस्तो प्रणाली मा गठन गुणस्तर एक प्राथमिकता हो भएकोले यो, एक गम्भीर कथन छ।
निर्माता CORSAIR पैसा बचत गर्न केहि निर्णय र साँच्चै रोचक उत्पादन सिर्जना गरेको प्रतियोगिहरु उत्पादनहरू तुलनामा। पहिले, दुई प्रशंसक प्रयोगकर्ता साँचो निष्क्रिय शीतलन प्रणाली सिर्जना गर्न अनुमति दिने, हटाउन सकिने छन्। दोश्रो, को बन्धन तत्व नै प्रणाली वा कूलर मास्टर EKL लागू रूपमा, प्लास्टिक को सट्टा धातु बनेको छन्। यस्तो देखिने नगण्य सुधार अझै पनि देखिने र एकदम प्रभावकारी छन्।
उपकरण बढते को सुविधाहरू
CORSAIR हाइड्रो शृंखला H110 ठंडा बक्स पानी वापस, धनी सेट प्रयोगकर्ता लामो पछिल्लो छैन आनन्द। कि समूहीकृत र सही ढंगले सीपीयू सकेट सेट गर्न आवश्यक घटक को दायरा दोष। जहाँ समस्या सुरु यो छ।
निर्माता तरिका negligently सम्मेलन किरा विवरण उपचार। समीक्षा मा, मालिक अक्सर यस अवसरमा नकारात्मक फेला परेन। यो तत्व को सबै गरेर बतान र प्रत्येक मंच लागि स्थापना ठंडा अल्गोरिदम सल्लाह दिन्छन् गर्न सम्भव थियो।
त्यहाँ वास्तविक दृढता गर्न प्रश्नहरू पनि छन्। आफ्नो सतह डबल-पक्षीय प्लास्टिक टेप प्रदान गरिएको छ, र तिनीहरूले धेरै महीना कागज प्लास्टिक बनेको छन्। वास्तवमा, स्थापना एक-बन्द छ। प्रयोगकर्ताले प्रोसेसर वा Motherboard परिवर्तन गर्ने निर्णय भने, उहाँले तुरुन्तै हेरविचार र एडेप्टर को एक नयाँ सेट लिनुपर्छ।
प्रणाली मंच सम्पर्क
को ठंडा सिस्टम को कुनै पनि को रोजगार ताप तत्व र कूलर बीच सम्पर्क को दक्षता मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले प्याड CORSAIR हाइड्रो शृंखला H110 पहिलो अध्ययन गरिएको छ। को तामा कोर लागि सेटिङ कारखाना थर्मल चिल्लो एउटा सानो संवर्धन पत्र छ। जाहिर छ, त्यसैले सबै ठाउँमा थर्मल पेस्ट को लागू गरिएको पत्र एउटा फोटो छ किनभने, प्रणाली को यो तत्व सन्दर्भमा मिडिया मा धेरै जानकारी छैन।
हो, प्याड निर्माता धेरै प्रयोगकर्ताहरू स्पष्ट फ्रेम। आखिर, यसको गुणस्तर शङ्का को एक नम्बर उठ्छ। हामी दर्पण सतह, सबै पालन छैन जो, र सम्पर्क समतल सतह को प्रभावकारिता बारे कुरा गर्दै छन् - थिचेर को चिह्न मात्र सर्कल को बीचमा छन्। यो साइट एक convex आकार छ भन्ने हो। तदनुसार, प्रोसेसर प्रयोगकर्ता गर्न कोर को एक विश्वसनीय फिट उच्च चिपचिपाहट संग थर्मल चिल्लो प्रयोग गर्नेछ।
सक्रिय शीतलन प्रणाली
तर CORSAIR हाइड्रो शृंखला H110 उपकरणहरू मा दुई विशाल प्रशंसक आफ्नो धेरै समीक्षा द्वारा न्याय, धेरै प्रयोगकर्ताहरू बीच भ्रम पैदा। पहिलो स्थानमा, ज्ञात निर्माता स्वामित्वको मात्र जो tearing एक स्टिकर, प्रयोगकर्ता निरुत्साहित गरिनेछ भन्छन्। को सहायक दृश्य निरीक्षण अब कुनै पनि नाम वा चिह्न पाउन सक्षम छ। यो वास्तवमा नकारात्मक विचार गर्न जान्छ।
को प्रशंसक कारीगरी लागि जाँदा, त्यसपछि त्यहाँ निर्माता एउटा प्रश्न छ। उदाहरणका लागि, प्ररित गर्नेवाला ब्लेड नेत्रहीन समान, तर त्यहाँ कूलर सुरु सा फेंकना गर्न भन्ने तथ्यलाई गर्न पछि नेतृत्व जो घुमाउँदा प्रक्रिया मा एक असंतुलन छ। यसले एक निर्मित प्रसन्न गति नियन्त्रक, जो पूर्ण कार्य सामना। तर, यो भ्रामक आवृत्ति सीमितता (700-1500 RPM) छ। म निर्माता बढी दायरा चाहन्छु। ताकि उत्साही हात द्वारा संयन्त्र परिष्कृत हुनेछ। एकै समयमा, तपाईं थप्न र पूर्ण प्रशंसक बन्द स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
तरल पदार्थ परिसंचरण सुविधाहरू
छोटो ट्यूब संग पहिलो नजर मा संग ठंडा प्रणाली CORSAIR H110 सुसज्जित छ। धेरै सम्भावित खरीदारों यस्तो सिस्टम कम्प्युटर मामला बाहिर झिक्न बस असम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छन्। उहाँले फेंकना कि केही आवश्यक छैन discovers के प्रयोगकर्ताको आश्चर्य हुनेछ, यन्त्र प्रणाली एकाइ को भाग हो र बस सिस्टम भित्र रहन बाध्य छ।
हो, यस्तो यन्त्र ठूलो ढाँचा ATX यस्तो प्रणाली को स्थापना को लागि मंच को शीर्ष मा प्रदान गरिएको छ जो आवास आवश्यक हुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं ट्यूब आफूलाई तथापि, यो पहिले नै प्रयोगकर्ता आफ्नै जोखिम मा चलिरहेको छ लामो पार्नू गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रणाली भित्र तरल को ड्राइभिङ लागि खुम्च्याउने सन्दर्भमा, त्यहाँ राय मालिक विभाजित छन्। केही कोर सीधा पंप को स्थान सन्तुष्ट छन्। अरूलाई खुम्च्याउने लागि शक्ति नेतृत्व संरचना को उपस्थिति भताभुंग पार्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर विशेषज्ञहरु र पंप एक volumetric तरल पदार्थ जलाशय जडान गरेर स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ प्रणाली को कोर छ कि दावी गर्दैन।
हामी पानी ठंडा सिस्टम CORSAIR H110 समीक्षा पकड जारी। धेरै सम्भावित खरीदारों स्पष्ट मंच को प्रभावकारिता देखाउन सक्षम छ भन्ने डाटा हेर्न रुचि। पहिलो यस्तो उत्पादन मंच को प्रदर्शन सुधार रोचक ओभरक्लकिङ प्रशंसक छ, त्यसैले गर्मी अपव्यय हामी केन्द्रित हुनेछ। वास्तवमा, सामान्य मोडमा ठंडा यन्त्र, रूपमा परीक्षण परिणाम देखाएको, क्रिस्टल आधा को तापमान कम गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, एउटै क्रिस्टल AMD नब्बे डिग्री सेल्सियस क्रम को विसर्जन मा एक अपरेटिङ तापमान भइरहेको FX-8300, चालीस डिग्री गर्न cooled गरिनेछ। यो एक राम्रो परिणाम हो, तर त्यहाँ साइड इफेक्ट छन्।
हामी शान्त सञ्चालन बारे कुरा गर्दै छन् - यो पूर्ण अनुपस्थित छ। दुई प्रशंसक लागि, 1500 RPM मा सञ्चालन, 40 decibels को गर्जन रूपमा अस्वीकार्य छ। तर गति कमी ठंडा दक्षता मा एक कमी गर्न जान्छ - CPU तापमान बिस्तारै तर निश्चित सत्तरी डिग्री सेल्सियस सम्म वृद्धि गर्न सुरु हुन्छ।
अर्को कार्य ठंडा सिस्टम CORSAIR हाइड्रो H110 प्रशंसक को कुनै पनि उत्साही सा हटाउनु छ। पछि सबै, सबै भन्दा प्रयोगकर्ताहरूको लागि, कम हल्ला र प्रोसेसर को कम महत्वपूर्ण तापमान बाहेक। यहाँ हे अलि, र सबै भन्दा राम्रो समाधान राम्रो केहि लागि नियमित impellers प्रतिस्थापन गर्न छ। बजार मा सबै भन्दा राम्रो तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ, Scythe प्रशंसक छन्, र आईटी प्रविधिहरू को क्षेत्र मा लगभग सबै विशेषज्ञहरु।
यो शोधन को परिणाम भविष्यवाणी गर्न एकदम सजिलो छ। पूर्ण quietness (31 decibels), र प्रयोगकर्ता संग एक बराबरीको मा क्रिस्टल ठंडा मा एक उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुनेछ। शक्तिशाली Scythe प्ररित गर्नेवाला प्रोसेसर AMD FX-8300 माथि 35 डिग्री न्यानो गर्न फैलाने छैन हुनेछ ठंडा सिस्टम को एक एल्यूमीनियम रेडियेटर वायु प्रवाह। Owning एक "चिसो» इंटेल क्रिस्टल को तहखाने मा आफ्नै निष्कर्ष आकर्षित।
को ठंडा सिस्टम CORSAIR H110i GT 280mm बहुमुखी प्रयोगकर्ता बारेमा समीक्षा। मुख्य नकारात्मक, जो उपकरण सबै मालिक ध्यान - यो overpriced छ। दस हजार rubles भन्दा, तपाईंले एक Motherboard वा प्रोसेसर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र सहायक बस हुँदैन। त्यहाँ दावी र कूलर छन्। यो ग्याजेट सस्तो प्रशंसक संग सुसज्जित छ जब निर्माता सोच थियो के एकदम अस्पष्ट। आफ्नो काम सबै प्रयोगकर्ताहरू द्वारा unsatisfactory हुन पाइन्छ। वास्तवमा, प्ररित गर्नेवाला स्रोत बस एक कूलर सुरु rumble र कराउनु कुन पछि, प्रयोग वर्ष सम्झना आउँछ।
सबै खरीदारों एक योग्य प्रोसेसर को ठंडा दक्षता लगे छन्। CORSAIR H110 सिस्टम पूर्ण रूपमा कार्य सामना। तथापि, सबैले ट्यूब को लम्बाइ संग खुसी छ, तर यो केवल तिनीहरूलाई, यन्त्रको collapsible डिजाइन रूपमा लामो पार्नू गर्न सक्छन् उत्साही लागि समस्या छैन। कुनै दावी र गठन गुणस्तर - केही बग्छ, सबै कुरा सुरक्षित र सुन्दर गरेको छ।
CORSAIR H110 उत्पादन ओभरक्लकिङ सबै प्रशंसक गर्न सिफारिस गर्न सकिन्छ, विशेष गरी यो सिफारिस गर्ने AMD बोट मा सिर्जना क्रिस्टल को मालिकहरूलाई भन्छिन्। ठंडा सिस्टम कुनै पनि प्रवेग लागि आवश्यक, गर्मी संग पूर्ण सम्हाल्छ। तथापि, स्रोत-गहन खिलौने को प्रशंसक पानी सिस्टम बारम्बार संघर्ष-सम्मेलन लागि डिजाइन छैन भनेर सजग हुनुपर्छ। त्यहाँ प्लास्टिक वास्तवमा डिस्पोजेबल जो, यस CPU सकेट एडप्टरका साथ गम्भीर समस्या हो। र थर्मल चिल्लो भविष्य मालिकले पहिलो पटक एक क्रिस्टल कोर बस्नुहोस् रूपमा तयार गर्न पनि आवश्यक छ एकदम गाह्रो छ।
इन्टेल कोर i3-3240 प्रोसेसर: विशेषताहरु, परीक्षण, समीक्षा, मूल्य
Ramses Tlyakodugov: जीवनी
मान्छे किन पहिलो लेख्न छैन? म पहिलो मान्छे लेख्न गर्नुपर्छ?
Amblyopia: वयस्क मा उपचार
Senezhskoe ताल। Senezh ताल - माछा मार्ने, छुट्टी
Misanthrope - यो राम्रो वा खराब छ?